SPORTS – Page 2 – Warfaafiye:
Ali Mohyadin Apr 23, 2018 0
Xiddiga Arsenal, Ainsley Maitland-Niles oo hooyadii ku rafaadsan…
Laacibkii Arsenal oo busaarad xun lasoo daristay kuna sigtay inuu…
SAWIRRO: Ciyaaryahan Soomaali ah oo koobka adduunka u ciyaari doona…
SAWIRRO: Wayne Rooney oo la xukumay kadib markii isagoo cabsan la…
DAAWO Laacibka Messi oo dhigtay arooskii qarniga oo malaayiin dollar ku baxday
Ali Mohyadin Jul 1, 2017 0
Xiddiga dunida ugu caansan ee kubadda cagta Lionel Messi ayaa guursaday gabdhii ay yaraantiisii isbarteen, waxaana arooskaan uu noqday arooskii qarniga ugu shidnaa. 250 qof oo lagu casuumay ayaa ka qeybgashay oo u badan ciyaartooy caan ah,…
Ali Mohyadin Jun 8, 2017 0
Wiilka lix sano jirka laacibka unida ee Cristiano Ronaldo ayaa qaaday wadadii aabahiis, isagoo dhaxlay farsamadii kubadda cagta aabahiis ku caan baxay. Cristiano Jr ayaa wacdaro lala yaabay dhigay habeenkii Real Madrid qaatay koobka…
SAWIRRO: Real Madrid oo markii 12-aad ku guuleysatay koobka Champion League
Ali Mohyadin Jun 4, 2017 0
Kooxda Real Madrid ayaa ku guuleysatay koobka horyaalka Yurub ee Champion League kadib, iyadoo 4-1 ay kaga badisay kooxda Juventus ciyaarta finalk oo ka dhacday magaalada Cardif ee Wales. Halyeeyga ciyaarta finalka oo noqday ciyaaryahanka…
Kooxda Arsenal oo markii 13-aad ku guulaysatay koobka FA CUP: SAWIRRO
Ali Mohyadin May 28, 2017 0
Kooxda Arsenal ayaa markii 13-aad ku guulaysatay koobka FA CUP kaddib markii ciyaartii finalka 2-1 ku garaacday kooxda uu xafiiltanka kala dhaxeeyo ee Chelsea. Chelsea ayaa ku rajo weyneyd in koobka FA-ga ay ku darsato midka Horyaalka…
Tababare ciyaartooy oo la dilay iyo ciyaartoy ka tirsan Elman oo dhaawacmay
Ali Mohyadin May 23, 2017 0
Warar goor dhow na soo gaaray Deegaanka Calamada ee degmada Afgooye ayaa sheegaya in caawa fiidkii la rasaaseeyay gaari nooca raaxada ah oo ay la socdeen Koox ciyaartoy ah. Masu’uuliyiin ka tirsan Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya ayaa…